Amava Akhuselekileyo Ekhaya - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Amava Akhuselekileyo Ekhaya
IWashington ijonge umva ngokusoyika kwesi sigqibo singalunganga.
Iimuvi ezisebenza ngokufihlakeleyo kweCIA zenza ezazo ii-clichés, kunye nogonyamelo kunye nokuchitha ixesha kunye nemali ebizwa Indlu ekhuselekileyo , beza ngababini, njengokubona okuphindiweyo. Lo mboniso bhanyabhanya awunakulunga nomzamo nokuba ubuthetha ngento ethile, engeyiyo. Ukulungiswa: Imalunga nendlela uDenzel Washington engekho ngaphezulu kokulahla igama lakhe xa umvuzo usebenza, nokuba imovie ayisebenzi.
URyan Reynolds, ohlala engagxeki njengokuba elungele ikhamera, udlala uMatt Weston, iarhente ye-CIA e-rookie eKapa eyabelwe ukongamela indlu efihlakeleyo efihlakeleyo apho abanqolobi, amajoni kunye nabafana abaneempawu ezihlekisayo abangachebanga okokoko kwawa udonga lwaseBerlin kubanjelwa imibuzo kwaye, mhlawumbi, lukhuselwe ngumthetho wase-US. (EKapa? I-Tropez yase Mzantsi Afrika? Apho kuphela kwabantu abathandwayo ngabakhenkethi abaphulukana nezitshixo zamagumbi abo?) Ngapha koko, yiloo nto ithi kumdlalo weqonga kaDavid Guggenheim onokuthi uchazwe kuphela njengowuseleyo emva kwenja Nditye imiboniso bhanyabhanya yesikolo yeFilimu 101 yasekhaya. Nangona kunjalo, emva kokutshitshisa isiqingatha somzi nge-action-flick monotony, i-preppie freshman spy ifumana phantsi kwemiyalelo evela kwikomkhulu laseLangley, Va., Ukulinda inhloli eyintloko ebizwa ngokuba nguTobin Frost (Mnu. Washington, e-dudgeon ephezulu kunye ne-doo enzulu -doo), okrokrelwa ngokungcatsha urhulumente wakhe ngeendlela ezoyikekayo ezingacacanga. UFrost wayekhe waba ligorha elikhulu le-CIA elibhale le ncwadi kumgaqo-nkqubo wophando ngaphambi kokuba ajike. Ngoku wonke umntu ulandela yena. Kuthatha ifilimu yonke iyure e-1, ixesha lokubaleka elinemizuzu engama-55 ngaphambi kokuba ufumanise ukuba bafuna ntoni kuye kwaye kutheni. Okwangoku, indlu ekhuselekileyo ihlaselwe ngababulali abaninzi uWeston ukholelwa ekubeni ngababulali, kwaye kufuneka abaleke nebanjwa lakhe ukusindisa ubomi babo bobabini. Isiphithiphithi ngakumbi silindele ngaphambili, xa ababulali bejika babe ziiarhente zeCIA ngokwabo, kodwa ndifumana inyathelo elinye phambi komdlalo bhanyabhanya osoloko ulinyathelo elinye emva.
Nge Weston ezama ukuqonda intsingiselo yemiyalelo yakhe ngeeselfowuni ezikumgama omde (bafumana ukwamkelwa ngcono eKapa kunaseMpuma Hampton) kunye noFrost ebaleka, egqogqa, edubula ngoomatshini, edubula ngesandla etshabalalisa isiqingatha seemoto, iilori, izakhiwo kunye nabahambi ngeenyawo abamsulwa ezitratweni, imovie iyawa kwindawo ekungxolwa kuyo yokuhlengahlengisa. Umfazi INew York Times ndothuke malunga nobuhle befilimu, endishiye ndibambe ongezantsi. Akukho nto intle nakusiphi na isakhelo esinye sekhamera eshukumisayo esiswini, i-grainy kunye nokushukuma ujikeleze kuthotho lokusondela okungathandekiyo. Nokuba imoto ibaleka, ibotshelelwe kwinqanaba lokuqhekeka kwindlebe, bayadutyulwa ngokusondelelana, bephanga abantu abathanda olu hlobo lwesiphithiphithi kulonwabo olulula lokuphuma kuhlobo lwezinto ezibulalayo ezingena endaweni yengxelo. Yonke le nto yenza ukuba kungabinakho ukufumanisa ukuba isihogo siqhubeka ntoni. Ungabhala iyelenqe kwicala elisecaleni lepini ye-bobby.
Phambi kokuba i-CIA ithuthunjise uFrost ukuba avume ukungcatsha umbuso, iindleko zakhe, kumzamo wokuzinikela ekwenzeni umsebenzi wakhe, afumane isikhundla esiphezulu kunye nokufumana umvuzo, urhuqa ityala lakhe kwilokhari kwibala lezemidlalo eligcweleyo, apho atshisa khona isihlwele kwaye abangele Uqhushululu esidlangalaleni, emva koko ubaleke ngethambeka lamatyotyombe amatyotyombe awileyo enziwe ngetoti. Emva koqhushululu olukhulu lwe-CIA (kubandakanya uSam Shepard, uVera Farmiga kunye noBrendan Gleeson kwifilimu yakhe yokuqala kwiminyaka apho ungayiqonda khona into ayenzayo) ukufika eMzantsi Afrika bevela eLangley ngokukhawuleza kunokuba kuthathe iso elibomvu ku-LA, baqala ukudubula kunye. Kuqhubeka ntoni apha? Kwanele ukutsho ukuba uFrost akasosi isithende uWeston acinga ukuba unaso. Apha kuza isicatshulwa malunga neefayile eziyimfihlo ezibonisa ulwaphulo-mthetho kunye nenkohliso ngaphakathi kwenqanaba le-CIA. Inye evuzayo kumajelo eendaba kwaye ingaphazamisa ukuthembeka nokungagungqi kwabantu baseMelika kurhulumente wabo! Ekugqibeleni, phantse wonke umdlali weqonga efile, eqhushumba kwihambhega kunye neenyawo ezintandathu ngaphantsi, kuye kwi-rookie ukugcina i-CIA kwiliso elimnyama kunye nokutshintsha ikhosi kwimbali.
Ngaba bayadlala? Sibonile ukuba i-CIA igculelwe njengendlwane yamarhamba, amaxoki kunye nababulali bezinja abanobuqhetseba abangcatshana kwezinye iimuvi ezininzi, zonke zibhetele kwaye zibambekile Indlu ekhuselekileyo. Ngapha koko, siye sabona amanqaku ezinye iimuvi ezikhuselekileyo zendlu, zonke zingaphezulu Indlu ekhuselekileyo. Ngeli xesha iphuli yokurhanelwa indala kakhulu inoboya. Ekhokelwe kubundlobongela obuninzi obuvakalayo kunye nobuncinci bezakhono ngumntu osandula ukufika waseSweden uDaniel Espinosa, imovie iyaqikelelwa kangangokuba uyifumene iyure ngaphambi kokuba abadlali bayenze. Lo ngumlawuli ongenalwazi onokuqonda okuncinci ukuba uyazibuza ukuba zeziphi iincwadi ezihlekisayo ebezifunda. Ngaphantsi kwelensi yekhamera eyohlwayayo, wonke umntu ujongeka esallow, anemic kwaye eyoyikeka, kubandakanya iVera Farmiga ehlala ikhangeleka. Nkqu GQ I-Coverboy Ryan Reynolds ineengxowa phantsi kwamehlo akhe ezinkulu njengee-walnuts.
Yonke le nto indenza buhlungu malunga nokuthatha inxaxheba kukaDenzel Washington. Ndiyamxolela ukuba imali ibingenakuphikiswa ngokwaneleyo ukuba ahlawule ityala okanye abeke abantwana bakhe eHarvard, kodwa Indlu ekhuselekileyo ayiyongxaki, kwaye ungomnye wabavelisi. Ndicinga ukuba ndimhlonipha kakhulu ukuba ndingambiza ngomthengisi we-junk, kodwa xa isihlangu silingana…
Ixesha lokubaleka 115 imizuzu
Ibhalwe nguDavid Guggenheim
Ekhokelwa nguDaniel Espinosa
Kudlala uDenzel Washington, uRyan Reynolds noRobert Patrick
Njani i-Lovelorn Best Russia's Lonely Hearts Scammers
Inzuzo yeQueers ngaphandle kweZiQhelekileyo 'isidoda kwi' Hot White Heist '
Ukuvuselela izigebenga: Imithombo ithi iNgxowa-mali yeHedge uDavid Ganek Ukulungele ukuthengisa i-740 Park Duplex
Imiboniso kufuneka ihambe kwi-Intanethi: Iindlela ezili-12 zokuSasaza iSigaba
uhlala phi ujessica alba
Iipilisi zokutya ze-otc ezilungileyo kakhulu 2019
Waye donald ixilongo kwitanki yookrebe
ucingo olujikeleze iziko lendibano ye-dnc
Eyona app ilungileyo yokukhangela ngokukhawuleza